Dawladda Somalia oo sheegtay inay bixiyeen Amar lagu Dilay Sarkaal Sare oo ka tirsanaa Alshabaab. – Hornafrik Media Network
Weerar Duqayn ah oo Shalay ka dhacay Agagaarka Deegaanka Tooratooroow ayaa lagu beegsaday Saldhig ay leeyihin Kooxda Alshabaab. Waxaana Weerarkaasi fuliyay Diyaaradaha Dagaalka ee Maraykanka. iyadoona Amarka weerarkan ay Dawladdu sheegtay inuu bixiyay Madaxwayne Maxamad C/laahi Farmaajo.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Eng. C/raxmaan Yariisow ayaa ku qoray bartiisa Twitter-ka inay Dawladda Somalia ka war haysay Duqayntaasi, Isla markaana Hawlgalkan fuliyeen Saaxiibadda Caalamiga ah ee Somalia, Wuxuuna Wasiirku sheegay in lagu dilay Hawlgalkan Horjoogihii u qaabilsanaa Alshabaab Qaraxyadda iyo Dilalka ka dhaca Muqdisho.
Wasiir Yariisoow ma uusan sheegin Magaca Horjoogaha la dilay.
Inta badan Mareykanka ayaa weeraro bartilmaameed ah ka fuliya Soomaaliya, kaasoo lagu beegsado Saraakiisha Al-Shabaab.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka oo ku aadan weerarka dowladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. sidoo kale Kooxda Alshabaab ayaan iyana ka hadlin Sheegashadda Dawladda Somalia.